Guri | Moutik
Taleefoonka istaaga iyo kan kiniiniga istaaga
Waxaan ku takhasusay naqshadeynta, caaryada, soo saarista, iibinta, OEM
& Adeegga ODM ee alaabooyinka kala duwan ee istaagga, sida haye baabuur magnetic, taleefanka baaskiilka, kaarka taleefanka muraayadda gaariga, kan taleefanka miiska haya, kan madaxa haysta iyo kan taleefanka caajiska leh Wax soo saarkayagu aad ayuu caan ugu yahay Waqooyiga Ameerika, Yurub, Koonfurta Ameerika, Bariga Dhexe iyo Koonfur Aasiya.
2021 cusub oo ah 360-ka cusub ee shahaadada loo rogayo mootada mootada mootada ee loo yaqaan 'Mount'
Miisaaniyaddan baaskiilka ee baaskiilka waxay isticmaashaa maqnaans + wax silicone ah, kaas oo ah mid xoog badan oo waara. Isticmaalka gaaska silicone ee labada qaybood ee heysta heysta ee heystaha taleefanka ayaa ka ilaalin kara taleefanka iyo xoqitaanka. Isla mar ahaantaana, gundhiggu wuxuu taageeraa wareegga 360-digrii, oo xor u ah inuu doorto xagasha ugu fiican. Haystaha taleefanka mobilada ayaa sahlan oo Enty si loo rakibo, aalado looma baahna, kaliya qalloocinta xorta ee kudhaca. Isugeynta ballaaran, qofka heysta taleefanka mobilada ayaa la jaan qaadi kara baaskiiladaha, mootooyinka, kuwa is-gooya, iwm.
Qalabka 'Universal' ee la isku habeyn karo ee mobilada mobilada mobilada mowduuca gawaarida gawaarida madaxa ah
Haystaha guud ee ugu dheelitiran kiniinnada iyo taleefannada gacantaHaystaha guud ee guud ayaa ku dhexjira "tayada fasalka koowaad ee leh naqshad qurux badan oo qurux badan". Way fududahay in la rakibo oo lagu rakibi karo kursiga dambe ee gaariga iyada oo aan wax qalab ah lahayn. Waxa kale oo aad ku raaxeysan kartaa madadaalada kursiga gadaal ee kaamilka ah ee gaariga. Bracket-kani wuxuu adeegsadaa suuflolone pads si loo wanaajiyo kala-goynta oo hubi in aaladdaadu aysan ka bixin doonin. Istaaggu wuxuu leeyahay is-waafajin ballaaran, waxaa lagu dabaqi karaa dhammaan 4-10.5 inji oo ah taleefannada gacanta iyo kombiyuutarada kiniiniga, waxaana sidoo kale lagu wareejin karaa 360 digrii, oo xor u ah in la doorto aragtida ugu fiican ee aragtida ugu fiican.
Tayada Sare ee 360 ​​Tayada Sare ee Telefoonka Gacanta Laptop-ka ee Laptop Desktop Telefoonka moobaylka moobaylka
Muuqaalka 1: Meel lagu dabaqi karoTilmaamaha 2: La jaan qaada: Taleefannada mobilada - 4-12.9 inji iyo kiniin ah oo loo beddeloMuuqaalka 3: Ilaalinta Silica Gel, oo aan la isku shaandheeyn, chuck aan is xoqin ayaa laga sameeyay walxaha silica gelTilmaamaha 4: Taageerada Miisaaniyadda ee Qaramada Miyo ma ruxdo miisaanka birta ee salka, afar gees oo ka mid ah ski-skid silictone saldhigga xasilloonidaTilmaamaha 5: jihada jihada jihada jihada dhinaceeda ee xagal madaxa ah ee 360 ​​° wareegga, xasilloon jilicsanTilmaamaha 6: Ha ku mashquulin safka aragga, kuma mashquulin hab-hagaajinta shaashadda bannaan ee bannaan ayaa ku habboon in la helo wax soo saarka wax soo saarka
Qiimaha Jumlada 360 Miiska Gacanta ee La Sixi karo Buur Laptop-ka Tablet Istaag Haysta Taleefanka Miiska Gacanta
Tilmaamaha 1: Meesha lagu dabaqi karo: Miisaanka xafiiska, guriga, biyaano, waxa uu furi karaa isticmaalka tooska ah, baro isticmaalkaTilmaamaha 2: La jaanqaadi kara: taleefanka gacanta -4-12.9 inch telefoonka gacanta iyo tablet-kaba si xor ah toosan iyo toosanTilmaamaha 3: Ilaalinta silica jel, aan silbasho lahayn, xoqin aan xoqin waxay ka samaysan tahay maaddada silica gelAstaamaha 4: Miisaanka birta taageero adag ma ruxdo miisaanka birta ee salka, afar geesood ee saldhiga silikoon-ka-hortaggaTilmaamaha 5: wareejinta jihaynta Madaxa kubbadda jihada 360° wareeg dhan xagal, xasiloon oo siman Fanalka 5: ha xidhin xariiqda aragga, ha mashquulin isku-habaynta booska saldhiga furaha waa la kala diri karaa oo kaydin habboonSifooyinka 6: Dad la hagaajin karo oo dhererkeedu yahay 30-50cm oo ku habboon xaalado kala duwan Waqtiga keenista badeecada: Meel la mariyo moQ 500 PCS 50 maalmood dufcada ugu horreysa, 25 maalmood ka dib
Macaamiisha Koowaad, Tayada Koowaad
& ADM ADEEGA
Waxaan u hoggaansameynaa "macaamiisha ugu horreyn, tayada ugu horreysa" ujeeddada, waxaanna si joogto ah u horumarinnaa alaabooyin cusub si aan ula kulanno baahiyaha shakhsiyeed ee macaamiisheena Si loo hubiyo tayada badeecadaha haysta taleefankayaga, waxaan si adag u xakameyneynaa tayada alaabada ceeriin ilaa wax soo saar, 100% kormeer ka hor rarka. Waxaan horumarin doonaa alaab tayo sare leh, waxaan bixin doonnaa adeeg tayo sare leh, waxaanna horumarin doonnaa macaashka macaamiisheena. Waxaan diyaar u nahay inaan lashaqeyno macaamiisha horumarka muddada-dheer. Shenzhen Gaarka ah Tengda Technology co., LTD. waxay siisaa qofka haysta taleefanka ugu fiican macaamiisha adduunka. Ka hel faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan kuwa haysta telefoonka jumlada ah, hadda la xiriir!
Waxaan bixin karnaa OEM / ODM, alaabada alaabada, adeegyada alaab-qeybiyeyaasha Amazon, iyo sidoo kale naqshadeynta xirmada, daabacaadda calaamadda iyo u dirista alaabada adeegyada FBA Waxaan horumarin doonnaa alaab tayo sare leh, waxaan bixin doonnaa adeeg tayo sare leh waxaanna sare u qaadi doonnaa macaashka macaamiisheena. Waxaan diyaar u nahay inaan lashaqeyno macaamiisha horumarka muddada-dheer.
La qaadan karo 3 ee 1 aluminium-aluminium alumbili la hagaajin karo taleefanka desktop positfinta buugga kiniinka ah
Istaatida laptop aluminium wuxuu ka kooban yahay shey tayo sare leh oo tayo leh. Naqshada fudud ee adag iyo saldhigga ballaaran ee laptop-ka ayaa ka dhigaya laptop laptop oo deggan oo aan gariirin; Saldhigga labalaab ee taagan ayaa lagu hagaajin karaa ballac, iyo laba laptops laba laptop ah ayaa si toos ah loo dhigi karaa isla waqti isku mid ah. Padka caagga ah iyo gidaarka caagga ah ee geeska ah waxay awood u siisaa qalabka elektiroonigga ah inuu noqdo mid si adag loona suursanaaya oo lagu meeleeyo desktop-ka ku yaal geeska.
Sii $ OEM / ODM
Shirkadda Shenzhen Special Tengda Technology Co., Ltd. waxay ku taal magaalada Shenzhen, gobolka Guangdong, oo u dhow Hong Kong iyo dekedda Yantian, xaaladaha saadka ee saadka, soosaarka iyo mootooyinka moobiilka jumlada ah iyo qaansooyinka kiniinka ah in ka badan toddobo sano wuxuu daboolayaa aag dhan 2500 mitir murabac ah, oo ay ka shaqeeyaan in ka badan 40 shaqaale ah, 6 khadadka wax soo saarka, QC
Qalabka Mashiinka baaritaanka QA, waxaan soo saari karnaa in ka badan 150000 nooc oo taleefan qaadayaal waara bil kasta.
Waxaan ku takhasusay naqshadeynta, caaryada, soo saarista, iibinta iyo adeegga badeecadaha kala duwan, sida istaagga taleefanka magnetka, istaagga taleefanka ee baaskiil, qofka haysta taleefanka muraayadda gaariga, kan taleefanka gacanta haysta, kaniiniga madaxa kaniisada haysta iyo kan haysta taleefanka caajiska ah Wax soo saarkayagu aad ayuu caan ugu yahay Waqooyiga Ameerika, Yurub, Koonfurta Ameerika, Bariga Dhexe iyo Koonfur Bari Aasiya.
Waxaan bixin karnaa OEM / ODM, alaabada alaabada, adeegyada alaab-qeybiyeyaasha Amazon, iyo sidoo kale naqshad xirmo, daabacaadda calaamadda iyo u dirista alaabada adeegyada FBA. Waxaan soo bandhigi doonaa xalal ka caawiya macaamiisheenna inay gaaraan guul weyn. Waxaan sugeynaa inaan kaa maqalno. Nala soo xiriir isla markiiba.